एमालेले कोइरालाको विकल्प खोजेको छैन :: शंकर पोखरेल (सचिव, नेकपा एमाले) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०५:२६ English
० एमालेको केन्द्रिय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा सुशील कोइरालाको विकल्प खोजिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको बुझियो, हो ?
– सुशील कोइरालाका नाममा सहमति हुन नसक्ने अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा छलफलका क्रममा उठाइएको मात्रै हो । यतिबेला लोकतान्त्रिक दलहरुबीच एकताको आवश्यकता र महत्वलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा हामी त्यसरी विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनौँ । नेपाली कांग्रेससमेत विकल्पमा जान चाहन्छ भने सामूहिक रुपमा विकल्प खोज्ने कुरा अर्कै हो । हामी एक्लैले विकल्पको कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
० त्यसोभए त्यसरी विकल्प खोजिएको होइन त ?
– कांग्रेसले पनि खोज्छ भने मात्र हो, अन्यथा हामीले त्यस्तो चाहेका छैनौँ । हाम्रो धारणा के चाहिँ हो भने एमाओवादी वर्तमान राजनीतिक समस्या निकासमा गम्भीर छैन, उ सत्ता छोड्न चाहँदैन, यस्तोमा कसरी निकास निकाल्ने भन्नेमा जसरी हुन्छ लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
० माधव नेपालले त्यस्तो कुरा किन गर्नुभएको होला त ?
– उहाँले आफूले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको नभई एमाओवादीको कुरा यस्तो छ भनेर पार्टी मिटिङमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको मात्र हो । उहाँले विकल्पको कुरा गरेर कांग्रेस या सुशील कोइरालाभन्दा बाहिर गई उम्मेदवार खोजौँ भन्नुभएको होइन ।
० तर, नेता नेपालले त कोइरालाको नाममा अल्झिरहँदा राजनीतिक गतिरोध लम्बियो भनी सार्वजनिक रुपमा पनि भन्नुभएको छ त ?
– दुनियाँले बुझ्दा उहाँले भनेकै जस्तो नदेखिएको पनि त होइन नि । यसको अन्तर्यचाहिँ यही हो कि एमाओवादी सहमति चाहँदैन । अनेक कुरा गर्दै उ सबैलाई अल्मल्याएर अधिनायकवाद लाद्न उद्यत् छ । जबसम्म एमाओवादी चुनाव पनि नचाहने र सत्ता पनि नछोड्ने नियतअनुरुप क्रियाकलाप गरिरहन्छ तबसम्म सहमति हुन नसक्ने मात्र होइन कि यस्ता अनेक प्रचारबाजी चलिरहन्छ, पार्टी–पार्टीबीच, नेता–नेताबीच विरोधाभास र फुट निम्त्याउने चालबाजी भइरहन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
० यस्तो अवस्थामा एमाले केन्द्रिय समितिको बैठकले निकासका लागि कस्तो निर्णय गर्छ त ?
– एमालेको निर्णय यथावत छ, यथावत रहन्छ । लोकतान्त्रिक दलहरुबीच एकता र उनीहरुबीचको सहकार्यबाट निकासको बाटो खोज्ने नै हाम्रो पार्टीको अवधारणा हो ।
० एमालेका कतिपय अन्य नेताले पनि कोइरालाको विकल्प खोज्ने पो हो कि भनेर कतिपय औपचारिक या अनौपचारिक अवसरमा कुरा गर्ने गरेका छन्, यसलाई कसरी लिने नि ?
– समस्या हल नभएको अवस्थामा ‘के गर्ने’ भनेर साथीहरुले विभिन्न राय प्रकट गर्नु अस्वाभाविक हुन सक्दैन, तर त्यो हाम्रो पार्टीको औपचारिक निर्णय या धारणा हुन सक्दैन । मूल कुरा माओवादीको दृष्टिकोण के हो, उसको अन्तर्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ सबैले । त्यो नबुझेसम्म अन्य विकल्प खोज्नुको अर्थ पनि रहँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिलाई नकारात्मक दिशामा लैजान यतिबेला एमाओवादीको सर्वसत्तावादी आकाङ्क्षा र वाह्य शक्तिको नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने चालहरु अघिबढिरहेको अवस्थामा एमाले एक्लैले विकल्प दिएर समाधान हुने विषय पनि होइन ।
० यस परिस्थितिमा बाबुराम भट्टराईको सरकार हटाउनका लागि तपाईंहरु कसरी अघि बढ्दैहुनुहुन्छ त ?
– पहिलो त हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने जुन प्रयास गरियो यो प्रयास असफल हुँदैछ भनी बुझ्दैछौँ हामी । दोस्रो, चार पक्षबीचको प्रयास असफल भएको परिप्रेक्ष्यमा अन्य पार्टीहरुलाई समेत समावेश गरिकन बहुपार्टीबीचको छलफलबाट समाधान खोज्ने बाटोमा पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह रहन्छ । यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका के रहन्छ, हामी त्यो हेर्नेछौँ ।
० वास्तवमा यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलेचाहिँ के गर्नुपर्ला तपाईंको बिचारमा ?
– राष्ट्रपतिले गर्ने नै के हुन्छ र ? ‘चार पार्टीबीचको प्रयास सफल भएन, अब बहुसंख्यक पार्टीहरु मिलेर के निचोड निकाल्छन् त्यसैलाई विकल्पका रुपमा अडाडि सार्नुपर्छ’ भन्ने त हो ।
० राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि त आएका छन् नि ?
– राष्ट्रपति आफैले छान्ने होइन, बहुसंख्यक पार्टीले मिलेर त्यस्तो निर्णय गरे भने त्यसरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिले ।
० राष्ट्रपतिलले पनि केही कदम चाल्न नसक्ने र बाबुराम भट्टराईले पनि नछोड्ने अवस्था रहिरहेमा त आन्दोलनमै जाने होला नि तपाईंहरु, होइन ?
– अरु विकल्प त के छ र हामीसँग ? त्यस्तो अवस्थामा त आन्दोलनमा उत्रनुको अन्य विकल्प रहँदैरहन्न ।
२७ पुष २०६९, शुक्रबार ०९:१५ मा प्रकाशित